थाहा खबर: वीरगन्जमा एकै परिवारका १७ जना कोरोना संक्रमित
छपकैयालाई फेरि शिल गर्ने तयारी
उनीहरु सबैजना आफन्त हुन्। वीरगन्जको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायले सबैजना एकै परिवारका भएको पुष्टि गरेका छन्।
गत वैशाख २१ गते संक्रमित पुष्टि भएका वीरगन्ज–३ छपकैयाका ३६ वर्षीय पुरुषकै परिवारका सदस्यहरु रहेको उनले बताए।
नारायणी अस्पतालमा जम्मा २५ जनाको उपचार गर्ने सक्ने गरी आइसोलेशन कक्ष बनाइएको थिो। तर त्यसलाई आन्तरिकरुपमा विस्तार गरी २८ जनासम्मलाई उपचार गर्न सक्ने बनाइएको छ। त्यसैले अहिलेलाई सबैको यहीँ उपचार गर्न सकिने मेसु डा. उपाध्यायले बताए ।
आइतबार संक्रमित पुष्टि भएका ३६ वर्षीय पुरुष र बुधबार भेटिएका संक्रमितलाई एकै ठाउँमा दूरी कायम गरी राख्ने तयारी भइरहेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ।
एकै दिन यतिका संख्यामा संक्रमित थपिन थालेकोले अब हरेक परिवार वा ठूलो समुदायलाई समेटेर जाँच गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ ।
अहिले वीरगन्ज–३ छपकैया क्षेत्रमा नै संक्रमित फेला परेपछि वीरगन्ज क्षेत्रमै जोखिम बढेको छ। छपकैयामा पहिले शिल गरी दुई दिनबाट केही खुकुलो गरिएको थियो। ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएपछि पुनः शिल गर्ने तयारी भइरहेको छ।